Japana: Topimaso ho an’ireo blaogin-tsakafo mampitelin-drora · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Oktobra 2018 4:10 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Français, русский, Deutsch, Español, 简体中文, 繁體中文, Italiano, বাংলা, English
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny 2009)
Manan-karena karazany ny sakafo japoney ary miova isaky ny vanimpotoana sy ny faritra, ary fialamboly iraisan'ny olona maro ao Japana ny fanandramana sakafo any amin'ny trano fisakafoanana maro, antsoina hoe tabearuki (食べ歩き).
Zavatra somary efa mahazatra ihany koa ny mampiakatra sarin'ireo sakafo lavorary any amin'ireo trano fisakafoanana manokana na vahiny na any amin'ny magazay mpivarotra paty tiana indrindra aza.
Okonomiyaki, avy amin'ny mpampiasa Flickr Yohei Yamashita
Mpankafy paty i Takezou Miyamoto Niten ary ao amin'ny blaoginy, naveriny nodinihana ireo soba eraky ny vilia baolina miisa 367 (蕎麦 paty vita amin'ny vary), 80 ny udon (うどん, paty fotsy marotsaka), 193 ny paty Sinoa (中華そば na ramen) ary sushis vitsivitsy.
Udon natao tanana, avy amin'ny mpampiasa Flickr : Dr. Colossus
”Greenling, grunt, filefish, sand borer, saurel…” lisitra lava be anà trondro navoakan'ny blaogera wnk_sho izay manazava [ja] ny toetra manavaka ny karazana tsirairay miaraka amin'ny sary fanehoana.
Sushi, avy amin'ny mpampiasa Flickr gbSk
Manana fahaizana manokana amin'ny boaty fasiana sakafo na ny bento amin'ny teny Japoney, izay matetika misy vary fotsy miaraka amin'ny laoka i neco, mpampiasa Flickr,. Miaraka amin'ny tenifototra bento nikki (弁当日記, diarin'ny boatin-tsakafo) aseho amin'izany ny bentos matsiro sy marevaka eo amin'ny ampolony mahery eo.
vy amin'ny mpampiasa Flickr neco
Maro be ihany koa ireo blaogy ifampizaran'ireo mpampiasa aterineto ny fomba fanaovana ireo sakafo japoney sy vahiny. Ohatra hoe ny Recipe blog [ja], izay vondrompiarahamonina blaogera mamoaka amin'ny antsipirihany ny fomba fanaovan-tsakafo avy amin'ny traikefa ara-tsakafo maro isankarazany ary ahitana sary manaraka azy.
Tany amin'ny faran'ny volana Novambra, nandritra ilay andro namoahana ilay torolalana Michelin ihany, sambany namidy vao voalohany indrindra ny torolalana hafa iray mikasika ny sakafo Japoney [ja]. Ao amin'ny dika voaprintin'ny tabelog.com [ja] izany, tranonkala mifototra tanteraka amin'ireo sosokevitry ny olona sy tsikera momba ny trano fisakafoanana, na lehibe na kely, manerana ny firenena, ao Okinawa ka hatrany Hokkaido.
Vatomamy Japoney, avy amin'ny mpampiasa Flickr bebot